प्रधानमन्त्री र रअ प्रमुखको भेटवार्तामा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही छैन : डा. महत - Janadesh Khabar
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. रामशरण महतले भारतका रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गरेको शिष्टाचार भेटवार्तालाई लिएर नेपालमा बहसको विषय बनाईनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भने, ‘यस्ता सानातिना विषयमा पनि राष्ट्रिय बहस गर्ने । यो भेटवार्ता राष्ट्रिय बहसको विषय होईन । किनभने आउनुभन्दा अगाडि यहाँ खबर पनि गरेको थियो अरे । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा पनि छ । एम्बेसीमार्फत खबर पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि भेट्न पनि चाहानुभएको छ । त्यसकारण भेट्नु भनेको यो ठूलो बहसको विषय होईन् ।’
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले रअ प्रमुखको प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्तालाई आपत्तिजनक छ भनेर सोधेको प्रश्नमा डा. महतले भने, ‘हावादारी कुरा गरेर हुन्छ ? हस्तक्षेप गरेको छ भने प्रमाणसहित भन्नुपर्यो । बिना प्रमाणविना हल्लाखल्ला गर्नु उचित होईन । यो भेटवार्तालाई अतिरञ्जित गर्न जरुरी छैन् ।’ उनले चीनले नेपालको भूमि मिचेको दाबी गरे । उनले थपे, चीनले नेपाली भूमि मिचेको छ । लाप्चामा सिमाको खम्बा, पोललाई सारेर २ किलोमिटर । हुम्लाका साथीहरुे आपत्ति गरिराखेका छन् ।”
१२ कात्तिक २०७७, बुधवार ११:२४ बजे प्रकाशित
चीनबाट जोखिम अनुभव गरेका जापान र अमेरिकाले गरे संयुक्त सैन्य अभ्यास